ပြင်သစ်ဂီယာ R ကို
WINCOMPUNI နံပါတ်ဖြင့် Unibet အပိုဆု ၁၂၀ ယူပါ
ငွေပေးငွေယူလုံခြုံရေး Unibet မှာအာမခံထားသည်, ကွဲပြားခြားနားသောငွေပေးချေမှုနည်းလမ်းများကိုလက်ခံရန်သင်ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ရှိသည်. သင်၏အကောင့်ထဲသို့ငွေသွင်းရန်, Visa သို့မဟုတ် MasterCard အကြွေးဝယ်ကဒ်ကိုသုံးရန်ရွေးချယ်နိုင်သည်, ကြိုတင်ပေး (PaySafeCard, လက်မှတ်ပရီမီယံ…), PayPal သို့မဟုတ် Moneybookers ကဲ့သို့သောအီလက်ထရောနစ်ပိုက်ဆံအိတ်မှတစ်ဆင့်ဆက်လက်လုပ်ဆောင်ရန်. မည်သည့်ကိစ္စတွင်မဆို, အလောင်းအစားတစ်ခုအတွက်အခကြေးငွေပေးစရာမလိုပဲအနည်းဆုံးအပ်ငွေပမာဏသည်စျေးကွက်ထဲတွင်အနိမ့်ဆုံးဖြစ်သည်.
သင်၏ငွေလက်ကျန်ကိုဆွဲလိုလျှင်သို့မဟုတ်ရယူလိုလျှင်, ဘဏ်ငွေလွှဲခြင်းဖြင့်သာဝန်ဆောင်မှုပေးသည်, အရာအတော်လေးကန့်သတ်သည်. သို့သော်, ထပ်မံကောက်ခံစရာမရှိပါ.
ပထမ ဦး ဆုံးအပ်ငွေအပိုဆုကြေး
100% £ 100 အထိ
100% £ 200 အထိ
Unibet ကြိုဆိုဆုကြေး: အဆိုပါပရိုမိုကုဒ်များ၏စည်းကမ်းချက်များနှင့်အခြေအနေများ
Unibet တွင်မှတ်ပုံတင်ရန်, မင်းဘယ်လ်ဂျီယံမှာနေရမယ်. အမျိုးသားမှတ်ပုံတင်မှမှတ်ပုံတင်နှင့်သင်၏နံပါတ်ကိုထည့်ရန်လိုအပ်လိမ့်မည်.
အားကစားသည်အနည်းဆုံးအသက်အရွယ်ကစားသမားများအတွက်ပွင့်လင်းမြင်သာမှုမရှိ 18 နှစ်ပေါင်း. ဖဲချပ်နှင့်လောင်းကစားရုံများအတွက်, သင်အနည်းဆုံးဖြစ်လိမ့်မည် 21 နှစ်ပေါင်း.
ပရိုမိုကုဒ်နံပါတ်ကိုသင်ပထမခေါ်ယူခြင်းမတိုင်မီလောင်းကြေးနှင့်တိုက်ရိုက်လောင်းခြင်းများနှင့်သက်ဆိုင်သည်။. ၀ က်ဘ်ဆိုက်အော်ပရေတာတွင်ဤကမ်းလှမ်းချက်ကိုကြိုဆိုသည့်အသေးစိတ်အချက်အလက်အားလုံးကိုသင်တွေ့လိမ့်မည်.
ပြီးခဲ့သည့်နှစ်ကပြင်သစ်ပရီမီယံအနိမ့်ဆုံးအဖြစ်လူသိများခဲ့သည်, Unibet ဆုကြေးသည်ကစားသမားများကိုရက်ရောမှုနှင့်ရိုးရိုးရှင်းရှင်းရရှိခြင်းကိုနှစ်သက်လိမ့်မည် (ဒီနေရာကိုယူ). အများဆုံးအရေအတွက် 120 €ဒီဆုကြေးငွေအမျိုးအစားများအတွက်ပိုကြီးတဲ့စျေးကွက်ဖြစ်ပါတယ်, နှင့်အလွန်ရိုးရှင်းသောစံရရှိသော. အခြေအနေများနှံ့နှံ့စပ်စပ်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာပြီးနောက်, အောက်ဖော်ပြပါစာပိုဒ်များအားလုံးကိုစုစည်းဖော်ပြလိုပါသည်.
1 အပိုဆုကြေးသည် Unibet ကိုပြန်လာသည်, ဒီပြီးတဲ့အခါ WINCOMPUNI ကုဒ်ကအရမ်းရိုးရှင်းစွာအလုပ်လုပ်တယ်ဟုဆိုပြီးနောက်ရရှိနိုင်. ကစားသမားအသစ်စီအတွက်, ပထမ ဦး ဆုံးအလောင်းအစားကိုအစားထိုးရန်အကြိုက်ဆုံးကိုသွင်းသည် Pierre Ménèresအပြည့်အဝကစားသည်, ဒါကြောင့်ပျောက်ဆုံးလျှင်. တစ်ခုတည်းသောလိုအပ်ချက်မှာအနည်းဆုံးဖြစ်နိုင်ခြေကိုလောင်းခြင်းဖြစ်သည် 1,40, အားလုံးအများအားဖြင့်တတ်နိုင်ပြီးနောက်ကြွင်းသောအရာကဘာလဲ. ကွန်ကရစ်လိုအပ်ချက်? ကျွန်ုပ်၏ Unibet အကောင့်ကိုဤတရားဝင် link မှ WINCOMPUNI ကုဒ်နှင့်ဖွင့်ပြီးအတည်ပြုပြီးနောက်, €လောင်းရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည် 120 နှစ်ခုပေါင်းစပ်ဂိမ်းများနှင့်တစ်ခုခြုံငုံအဆင့်သတ်မှတ်ချက်အပေါ် 4,00. ငါအလိုရှိသည်အလောင်းအစား? ငါလက်ခံတယ် 360 €သန့်ရှင်းပြီးငါ့ jackpot တင်းမာမှုများ€ဖို့ 480. မဖြတ်ပါနဲ့? စိတ်မပူပါနဲ့, ငါလက်ခံတယ် 120 မိမိကိုယ်ကိုပြန်လုပ်ရန်အလောင်းအစားရှိသည်. လွဲချော်ရန်မ.
အကယ်၍ သင်၏ပထမဆုံးလောင်းသည့်အချိန်တွင်သင်၏အကောင့်ကိုမှန်ကန်ကြောင်းသက်သေပြနိုင်ခြင်းမရှိကြောင်းသင်သတိပြုမိလိမ့်မည်, Unibet သည်သင့်အားအလိုလျောက်လွှဲပြောင်းပေးလိမ့်မည် 50% သင်၏ပထမဆုံးအလောင်းအစား, နှင့်အခြား 70% အတည်ပြုပြီးနောက် (70 ငါထားမယ်ဆိုရင်€ 120 €). ထို့ကြောင့်ဤစာမျက်နှာတွင်သင်မှတ်ပုံတင်ထားသောကြောင့်သင်၏အကောင့်ကိုအတည်ပြုရန်သင့်အားကျွန်ုပ်တို့တိုက်တွန်းပါသည်။.
အလောင်းအစားအတိုင်းအတာကို Unibet တွင်ရနိုင်သည်
Unibet, သငျသညျနီးပါးဘာမှအပေါ်လောင်းနိုင်ပါတယ်, အဖြစ်ကောင်းစွာလူသိများအားကစား၌တည်၏ (ဘောလုံး, ဘတ်စကက်ဘော, ဘော်လီဘော ...) နှင့်လျော့နည်းလူသိများ (Pesapallo ခရစ်ကက်, လှေခါး, စက်ဘီးစီးခြင်း). နိုင်ငံရေး (သို့) လာမည့်လက်တွေ့ပြပွဲ၏အောင်မြင်သူကိုသင်လောင်းနိုင်သည် (ဥပမာအားဖြင့်, X-Factor).
အားကစားအတွက်, သင်မတိုင်မီသို့မဟုတ်စဉ်အတွင်းအလောင်းအစားနိုင်ပါတယ်, တစ် ဦး တည်းသို့မဟုတ်ပေါင်းစပ်၌တည်၏. ဤကိစ္စတွင်, ဒါကြောင့်တိုးမြှင့်ဖွယ်ရှိသည်, အမြတ်အစွန်းလိုပဲ. အခြားတစ်ဖက်တွင်, အိတ်ဆောင်အမြတ်အစွန်းနဲ့ပါ ၀ င်တဲ့ဟန်းဆက်မှာပါတဲ့ပါရီကိုသွားမယ်.
အလောင်းအစားစနစ်တစ်ခုကိုလည်းသင်လောင်းနိုင်သည်. ပေါင်းထားသောလောင်းခြင်းနှင့်မတူသည်, မင်းအနိုင်ရနိုင်တယ်, အားလုံးမျှတသောအကြံဥာဏ်ကိုပင်လျှင်.
နောက်ဆုံးတော့, အထူး Unibet ဇယားကွက်ပေးထားသည် (MultiMax / တိုတိုစူပါ / စူပါရမှတ်), ဒါပေမယ့်လည်း BetUp, ဉာဏ်စမ်းပဟေesိများနှင့်အားကစားလောင်းကစားများကိုရောစပ်ပါ.
1N2: အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့၏ဆုရှင် 1,2သို့မဟုတ်ဆွဲပါ
နှစ်ဆအခွင့်အလမ်း: အသင်း၏အောင်ပွဲနှင့် 1 ဆွဲ / အသင်းဆွဲခြင်းနှင့်အနိုင်ရ2/ အဖွဲ့အောင်ပွဲခံ 1 သို့မဟုတ်အဖွဲ့သည်အနိုင်ရရှိသည် 2
မသန်မစွမ်းမှုအနိုင်ရသူ Anderlecht ကို Standard နှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်အထူးလောင်းကစားခြင်း 2,5 သို့သော် (Anderlecht ကျော် 2,5)
ပွဲတစ်ပွဲတွင်သွင်းယူထားသောဂိုးအရေအတွက် / ငါ့အချိန်
အလောင်းအစားလုပ်ရန်, ရရှိနိုင်စာရင်းဇယား. ဂိမ်းတစ်ခုစီအတွက်, သင်သည်အောက်ပါအချက်အလက်များကိုရိုက်ထည့်ပါ:
ကျော်လွန် / အောက်မှာ, နေအိမ် / အပြင် 1/2 တစ်ဝက်
အပိုဆု Unibet အားကစား : ကျွန်တော်တို့ရဲ့အကြံဥာဏ်
ဤစာမျက်နှာပေါ်တွင်သင်၏ Unibet အကောင့်ကစားသမားများဖွင့်ပြီးအတည်ပြုပြီးနောက်, ကျွန်ုပ်တို့၏အမြင် Unibet တွင်အော်ပရေတာများလည်ပတ်ရန်ထိုက်သည်, စိတ်ဝင်စားစရာအကောင်းဆုံးအချိန်ရောက်လာပြီ: အော်ပရေတာများနှင့်သင်၏ပထမဆုံးလောင်းကစားခြင်း. ကြောင်းမပြုမီ, ငါတို့သည်သင်တို့ကိုထည့်သွင်းအကြံပြုအပ်ပါသည်, သင့်ရဲ့ဘတ်ဂျက်ခွင့်ပြုလျှင်, ပမာဏ 120 သင့်အကောင့်ပေါ်€. ဘာကြောင့်လဲ? အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်၎င်းသည်သင်၏အများဆုံးအလောင်းအစားပြန်အမြင့်ဆုံးကိုရောက်လိမ့်မည်, ဘာဘွတ်မန်းကကတိပေးခဲ့တာ. နောက်ထပ်အရေးကြီးတဲ့အရာ, ပထမဆုံးရှုံးနိမ့်သည့်အလောင်းအစားများကသာအပိုဆုကြေးကိုသင့်အတွက်အရည်အချင်းပြည့်မီကြောင်းမမေ့ပါနှင့်. သငျသညျ drop လျှင် 120 €နှင့်သင်ဥပမာလောင်းကစား5paris 20 ယူရိုသာ 20 €အခမဲ့လောင်းကြေးများအောက်တွင်ပေးထားသောအခမဲ့လောင်းကြေးများကိုဤနေရာတွင်ရရှိနိုင်ပါသည်. နောက်ဆုံးတော့, အဆုံးစွန်သောရည်မှန်းချက်မှာသင်၏ပထမဆုံးအလောင်းအစားဖြစ်သည်. ရဖို့ကြိုးစားတာကအကောင်းဆုံးပါပဲ 200 ကျိုးကြောင်းဆီလျော်စွန့်ပစ်မှုနှင့်အတူ€အသားတင်, ကစားတာထက် 24,00 မသွားနိုင်သည့်ပေါင်းစပ်အဆင့်သတ်မှတ်ချက်. အထူးသဖြင့်အခမဲ့လောင်းကြေးဖြင့်ရရှိသောအသားတင်အမြတ်ကိုသာအမှန်တကယ်ပိုက်ဆံမှဆုတ်ခွာလိမ့်မည် (ငါရရှိလျှင်သိရန် 120 €အလောင်းအစားနှင့်အလေးသာမှုနှင့်အတူအလောင်းအစားအနိုင်ရ 2,00, ကိုယ့်ကိုသာဆွဲဆောင်နိုင်ပါ၏ 120 €သို့မဟုတ်ထိုထက်နည်းကန ဦး ညှိအကျိုးအမြတ်).
Previous Previous post: ပြင်သစ် Unibet